‘राजनीतिक दलले समाजलाई भ्रष्ट बनाउँदै छन्’ : घनश्याम भुसाल | सुदुरपश्चिम खबर
म यो बजेटको समर्थन गर्न आएको हुँ । तर त्यो अकारण भने छैन । यसको पहिलो कारण त यो धेरैले रुचाएको बजेट छ । करिब आठ लाख कर्मचारी तलब बढेकोमा खुसी छन् । १३/१४ लाख बृद्व भत्ता बढेकोमा खुसी छन् । हामी निर्वाचित सांसद त्यसमध्ये पनि निर्वाचितहरु ६ करोडले खुसी छौं । धेरै मान्छे खुशी छन् । यसको प्रभाव निजी क्षेत्रमा पनि पर्नेछ र निजी क्षेत्रका कामदारको पनि तलब बढ्नेछ । यसर्थ उनीहरु पनि आशाका साथ खुसी छ ।
यस अर्थमा फेरि पनि हामीले यो संकल्प, यो दाबी, यो सपना बजेटबाट देखेका छौं कि पाँच लाख रोजगारी सिर्जना हुनेछ । त्यो भनेको अहिले विदेश जाने जुन दर छ, त्यो भन्दा बढी हो । यसअर्थमा श्रम बजारमा अहिले जति मान्छे आउँछन्, ती सबै मान्छे वा एक वर्षमा आउने जति युवा श्रम शक्ति देशभित्रै खपत हुन सक्छ भन्ने सपना/दाबी यसमा गरिएको छ । यसअर्थमा यसलाई मैले समर्थन गरेको हुँ ।
यो मैले आजको मात्र कुरा गर्दै छैन । गएको २० वर्षदेखि यस्तो हुँदैछ । यसको प्रक्रिया त्यो भन्दा धेरै अगाडिदेखि सुरु भएको थियो र आज हामी यो फेर्छाैं कि फेर्दैनौं भन्ने प्रश्न, यो अर्थमन्त्रीको प्रश्न, प्रधानमन्त्रीको प्रश्न, कुनै सत्ताधारी दलको प्रश्न भन्दा यो बृहत प्रश्न हो । आजको राष्ट्रिय विमर्शको प्रश्न हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ ।
त्यसले गर्दा जसले ११ खर्ब खान्छ र ४ खर्ब लगानी गर्छ । यही स्थिति रहने हो ? यत्रो समयपछाडि हामीले क्रान्ति गर्‍यौं । त्यो क्रान्तिले यसलाई फेर्छ कि फेर्दैन ? यसको संरचनात्मक परिवर्तन गर्छ कि गर्दैन ? इतिहासबाट हामीलाई मुक्त पार्छ कि पार्दैन भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न हो । राजनीतिक हिसाबले भन्ने हो भने यास्ता विषयमा बहुत कम छलफल चल्ने गरेको छ ।
धेरै वर्ष अगाडि राजेश्वर देवकोटाले भन्नुभएको थियो – हामी पञ्चायतमा किन लाग्यौं भन्दा राजाले साँच्चै रामराज्य ल्याउँछन् भनेर लागेको । साच्चै देश बनाउँछौं र त्यो न्यायपूर्ण, बडा राम्रो समाज हुन्छ भनेर नै लागेका थियौं । जब २०२५/०२६ सालतिर राजा महेन्द्र रेजा शाह पहलवीको निम्तामा इरान गए । त्यहाँको राजाको जुन सान सौकत देखे त्यहाँबाट फर्किएपछि उनले अब मनोमानी गर्न थाले । यो राजेश्वर देवकोटाजीले भनेको शब्द मैले सुनेको हुँ ।
यस्तो नेक्ससको कुरा दलाल पुँजीपति र राजनीतिक मान्छेको नेक्ससको कुरा यहाँको मात्रै कुरा होइन । १९६१ मा क्यारे आइजन आवरले अमेरिकाका राष्ट्रपति हुदै गर्दा एउटा वक्तव्य दिएका थिए । मिलिटरी र यो इन्डस्ट्रीको नेक्सस हाम्रो प्रजातन्त्रका लागि एउटा खतरा हो भन्ने महत्वपूर्ण भाषण गरेका छन् । त्यो भनेको युद्ध सामाग्री उत्पादकहरु, हतियार उत्पादकहरुले त्यहाँको सत्तालाई, सांसदहरुलाई, राजनीतिक दलका नेता मिडियालाई अमेरिकामाथि युद्धको त्रास देखाएर हतियार किन्न लगाउने, यसरी यो मिलिटरी र इन्डस्टि्रको नेक्ससले करिब करिब त्यहाँको प्रजातन्त्रमाथि खतरा मडारिरहने कुरा गरेका थिए र त्यो अहिले तथ्याङ्कमा हेर्ने हो भने एक्लै अमेरिकामा लाग्ने हतियारको खर्च त्यसपछिका अरु सबै पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो गर्दाखरि ११/१२ वटा मुलुकहरुसम्मको हतियारको खर्च एक्लै अमेरिकाले बेहोर्छ । जुन कुरा आइजन आवरले भनेका थिए ।
हाम्रो सन्दर्भमा पनि यो सन्दर्भमा छलफल गर्नु पर्छ कि पर्दैन ? बजेटको कुरा होइन । बजेट त अर्थतन्त्रको, अर्थव्यवस्थाको एउटा कुरा हो । हामीले यस्ता विषयमा छलफल गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्न मैले यहाँबाट उठाउन चाहेको छु । यसरी हेर्दा आज पनि पराधीन अर्थतन्त्रको नेता दलाल पुँजीपति हो । जसले त्यही युद्धका हतियार ब्यापारीहरुले जस्तो सारा प्रपञ्चहरु गर्छ र राज्यलाई डुलाइरहन्छ । यो कति हो हामीकहाँ ? यो हो कि होइन ?
आजसम्मका भ्रष्टाचारहरुले र बेतिथीहरुले, त्यो बेथितीमा माथिल्लो तहका राजनीतिक मान्छेहरुको पहुँचले, तिनको नियन्त्रणले, तिनको निर्देशनले यो कुरा गाइड गर्छ कि गर्दैन ? यसबारेमा हाम्रो छलफल हुनुपर्छ ।
यसले प्रजातन्त्रमा आउने खतरा, विधि विधानमा हुने बलमिच्याई, कहिले राज्यबाट, कहिले बाहिरबाट तमाम विकृतिहरु आउँछन् । खास बेलामा तिनीहरुको एकता पनि त्यसैले गराउँछ । किनभने यसै भन्न सकिन्छ कि अर्बभन्दा माथिका भ्रष्टाचारहरु तलका ब्युरोक्रेसीले मात्रै गर्छ ? यद्यपी कारबाही भयो भने त्यही ब्युरोक्रेसीको मान्छे पर्छ । माथिका मान्छे कम पर्ने गरेका छन् । तर, यो निसन्देह भन्न सकिन्छ कि, ठूला घोटालाहरु एक्लै हुँदैन । एक हिसाबले भन्ने हो भने त्यहाँ राष्ट्रिय सहमति बन्छ । हाम्रो दलाल पुँजीवाद र परजीवि राजनीतिक संरचनाको जुन नेक्सस छ, त्यसले निरन्तर हाम्रो विकासलाई, अधिकारलाई, लोकतन्त्रलाई निरन्तर खुम्याइरहेको छ । यसतर्फ हामीले सोच्नुपर्छ होला ।
मैले बजेटलाई समर्थन गर्दै बजेटहरुको विषयमा यीनै कुरा राख्न खोजेको हुँ । यसर्थ यो विषयमा राजनीतिक हिसाबले छलफल हुनुपर्‍यो । यसो हेर्दा हामी सत्ताधारी हौं, बजेट बनाउनुपर्नेछ, लागू गनुपर्ने छ अनेक काममा व्यस्त छौं । प्रतिपक्षले पो यस हिसाबले (छलफल) गर्छ कि भनेको त्यो प्रतिपक्ष त पराजयको पीडाले अझै ब्युँझेको पनि छैन । त्यो यसरी घाइते भएको थियो कि त्यो उठेको पनि छैन । जनजागरण अभियानमा यस्ता विषयमा कुरा गर्दैन । झिना मसिना विषयमा कुरा गरिरहेको छ । दलाल पुँजीवादबारे कहिँ बोल्छ ? भन्दा कहिँ सुनिदैन ।
यसले गर्दा हामी खतरामुक्त चाहिँ छैनौं । यसअर्थमा हाम्रो क्रान्ति खतरामुक्त छैन, हाम्रो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र खतरामुक्त छैन भन्ने लाग्छ ।
छलफलकै क्रममा अलि अगाडि माननीय प्रदीप गिरीले भन्नुभएको थियो ग्रोथ र सोसल जस्टिस संगसंगै जाँदैन जाँदैन जाँदैन भनेको सुनेको हुँ । यो ठूलो प्रश्न थियो तर, हामीले वस्तुत कहिल्यै छलफल गरेनौं । हामीले समृद्ध समाजवादको कुरा गरेका छौं भने प्रदीप गिरीले उठाएको कुरा सैद्धान्तिक रुपले समाधान गरेर जानुपर्छ ।
यसो हो भने समाजवाद कस्तो हुन्छ भन्दा एक लाइनमा भन्ने हो भने अबको १०/१५ वर्षका लागि समाजवाद भनेको काम गर्न सक्नेहरुले काम पाउने, काम गर्न नसक्नेहरुले संरक्षण पाउने व्यवस्था हो । त्यही दौरानमा हामीले समृद्धि प्राप्त गर्छौ । मुलुक समृद्ध बन्दै जाँदा हामी समाजवादको अर्को ऐतिहासिक यात्रामा प्रवेश गर्छौं भन्ने मलाई लाग्छ । अन्तत, यो पपुलर बजेको समर्थन गर्छु । तर बजेटहरुका बारेमा छलफल गर्न आह्वान गर्छु । धन्यवाद ।
(प्रतिनिधिसभामा मंगलबार भएको बजेट छलफलमा भुसालले व्यक्त गरेको धारणा )
ट्यागहरु: ghnsyam bhusalsudurpashimkhabar